Waa Kanaa Telefonka Ugu Horeeyay Aduunka Ee Lasameeyay? - iftineducation.com
iftineducation – Waa kanaa telefonkii ugu horeeyay aduunka ee lasameeyay oo cabirkiisa aad u weynyahay, laakiin telefonkaan waxaa ugu hadli kartaa oo kaliya fogaan la’eg haaf mile kaliya.
Marka laga fiiriyo xaga design ka iyo cabirka weyninka, telefonkan ugu horeeyay aduunka aad ayuu uga fogyahay marka loo fiiryo telefonada casigaan, oo saa’idka uyar, kulana hadli kartid meeshaad doonto caalamka. Laakiin ogoow waa meeshow ka soo curkaday telefon.
Ninka hal abuuray telefon, Nathan Stubblefield akhirki waxaa loo qirtay inoow yahay aabaha teknologi-ga telefon-ka 100 sano kadib.
Nathan Stubbefield wuxuu ahanjiray beeraley iska caadi ah oo saa’id u jeclaa IPTEK xata waxow lakulmay radio Nikola Tesla ama Guglielmo Marcon laakin radio ga uu helay waxow isticmaalaayay frekuensi audio induction, waxaa loogu sabab yeelaa radio induction-ka waxow sababay inow qas labay deegaanka oo udhawaa sidaas aawadeeda ayuu kaga guuldareestay caan ahaan radio transmission oo lakulmay Nikola Tesla ama Guglielmo Marcon.
Sanadka markuu ahaa 1902 melon waxow layimid waxo lakulmay, kadib markii uu waqti badan ku lumiyay sido u abuuri lahaa qad isgaarsiin magaaladow kasoo jeeday ee Murray, Kentucky.
Waxow sameeyay anteeno gaareyso 120 cag, taasoo awoodo iney cod ka telefon ugudbiso telefon kale ayado la isticmaalaayo magnet.
Waxow soo bandigay halabuurkiisa magaalada alun-alun maalinta sanadka cusub ee 1902.
Sanadka markuu ahaa 1908 waxow soo saaray telepon nirkabel version cusub si ay iskula xiriiraan baabuurta guurguurta.
melon wuxuu dhintay sanadka markuu ahaa 1928.
Laakiin hadda waxaa loo qirtay “Father of The Modern Mobile Phone” ,xataa Virgin Mobile waxey u sameysay page khaas u ah sanad guuradi kasoo wareegatay lakulanka (telefonki ugu horeeyay) ee Nathan Stubbefield, website kooda rasmiga ah.